MAUDS ICE CREAM ORMEAU လမ်းမတွင်ဖွင့်လှစ်ရန် - သတင်း
Mauds Ice Cream Ormeau လမ်းမတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်
Mauds Ice Cream သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ကျောင်းသားများအတွက်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီးယခုပြောဆိုချက်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်သူတို့ Ormeau လမ်းမကြီးတွင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ဟားဇတ်!
မြောက်အိုင်ယာလန်သည်တိုက်လေယာဉ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်အချိန်တွင်ပျံ့နှံ့နေသောကြောက်မက်ဖွယ်သတင်းများကြားတွင်ဤဖွင့်ပွဲအသစ်သည်ဘဲလ်ဖတ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်လတ်ဆတ်သောလေကိုရှူသွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Mauds သည် NI ရှိရေခဲမုန့်ဆိုင်များပေါ်ရှိလူကြိုက်များသောဆိုင်ဖြစ်ပြီးလူစားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသောချောကလက်များပါဝင်သောအချိုပွဲတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေလျှင်လစ္စဘန်းလမ်းမပေါ်ရှိကော်ဖီဆိုင်သည်ထိပ်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ pooh- ဝက်ဝံ (ပုဂ္ဂိုလ်ရေး fave) ၏ Wee ကန်တော့ချွန်။
တိုးချဲ့ထားသောတိုးချဲ့လုပ်ငန်းကိုနောက်ဆုံးဖြည့်စွက်မှုသည် Ormeau လမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးကျောင်းသားအများအပြား၏အိမ်တံခါးဝသို့ Mauds Ice Cream ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆောင်ကျဉ်းပေးလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်တားမြစ်လို့လစ္စဘန်လမ်းကိုသွားပြီးရောဂါပျောက်ကင်းသွားတယ်။
ဘဲလ်ဖတ်စီးတီးကောင်စီ၏ရုက္ခဗေဒရပ်ကွက်အတွက် SDLP ကောင်စီဝင်ဂယ်ရီမက်ကာသည်တောင်ပိုင်းဘဲလ်ဖတ်အသိုင်းအဝိုင်းသို့ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ကွင်းဆက်ကိုချီးကျူးခဲ့သည်။
Mauds Ormeau လမ်းမကြီးသို့လာနေသည်ထင်! @maudsicecreams pic.twitter.com/yUMPo32Amw
- Cllr Gary McKeown (@garymckeown) အောက်တိုဘာ 12, 2020
Belfast Tab ကိုစကားပြောသောကောင်စီဝင် McKeown က Mauds Ormeau လမ်းမကြီးပေါ်သို့ရောက်ရှိခြင်းကိုတွေ့ရတာအလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ ဤမြို့သည်ကော်ဖီဆိုင်ကြီးများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များစွာရှိသောမြို့၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊
သူကဆက်ပြောသည် - ဤသည်မှာဘဲလ်ဖတ်ဒေသရှိဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူအများအတွက်အနည်းငယ်သောဓာတ်လှေကားကိုပေးနိုင်သည့်တည်ထောင်ခြင်းအသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရ။ ၀ မ်းသာပါသည်။ ခန့်မှန်းရခက်သည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်theရိယာကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးလက်ရှိစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါ့အပြင် QUB သမိုင်းကျောင်းသား Lucy ဘဲလ်က“ Mauds ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းချစ်တယ်။ ဒါကတော့ပူနွေးတဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းဖို့ပူစီနံတောင့်ရေခဲမုန့်ရဲ့စွမ်းအားကိုဘယ်တော့မှလျှော့မတွက်သင့်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီဌာနခွဲအသစ်ကငါ့ကိုယ်ပိုင်တံခါးနဲ့အရမ်းနီးတဲ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ် ။ ဤခက်ခဲသောကာလများအတွင်း Mauds ကဲ့သို့သောဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှင်သန်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရခြင်းသည်လည်းတောက်ပပါသည်။
Rick နှင့် morty ရယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး
Mauds Ice Cream သည်ဖွင့်ပွဲ၏နေ့ရက်ကိုအတည်မပြုရသေးသော်လည်းစတိုးဆိုင်၏မျက်နှာပြင်သည်အမြဲတမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းသော Ormeau လမ်းမကြီးတွင် ပို၍ ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။